Survey စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် မေးခွန်းကောင်းများ ရေးပုံရေးနည်း - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on May 28, 2014 at 10:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့တော့ စာရေးခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ ရေးရလိမ့်မယ်လို့ စဉ်းတောင် မစဉ်းစားမိမယ့် စာရေးခြင်း အမျိုးအစားအကြောင်း ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စစ်တမ်းနဲ့ စစ်တမ်း မေးခွန်းလွှာ (surveys and questionnaires) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနပဲလုပ်လုပ်၊ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကုန်စည်အသစ်အတွက် စုံစမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Facebook (သို့) blog ပေါ်မှာ အပျော်ပဲဖြစ် ဖြစ် အကောင်းဆုံး သတင်းအချက်အလက်ရဖို့ဆိုရင် စစ်တမ်းမေးခွန်းကို ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ လိုလာပါပြီ။
ဒီလို စစ်တမ်းမေးခွန်းတွေရေးဖို့ ကိုးကားဖို့အချက်အလက် (references) တွေရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ အဓိက သိလာရတာကတော့ စဉ်းစားစရာအချက်တွေများလွန်းလို့ သင့်ရဲ့ စစ်တမ်းဟာ တကယ့်ကို အရေးကြီးရင်တော့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ ရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပညာရှင်တွေဟာ အချက်အတော်များများအပေါ် သဘောတူကြတဲ့အတွက် သင့်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်တဲ့ စစ်တမ်း တွေဟာလည်း ပညာသားပါတယ်လို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
Define your Survey Goals (စစ်တမ်း၏ ရည်မှန်းချက်ကို သတ်မှတ်ပါ။)
ပထမဦးဆုံး ဒီစစ်တမ်းကနေ ဘယ်လိုမျိုး အချက်အလက်တွေကို ရချင်တာလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သင် ဘယ်လိုအချက်တွေကို ရှာနေတယ်ဆိုတာကို သင်ကိုယ်တိုင်က မရေမရာဖြစ်နေရင်တော့ သင်ရလာမဲ့ အဖြေတွေကလည်း ပြတ်သားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Put Easy Questions First (လွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အရင်ထားပါ။)
မေးခွန်းများကိုတော့ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် သဘာဝကျကျ စီစဉ်သင့်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတူတဲ့ မေးခွန်းများကိုလည်း အုပ်စု တစ်ခုတည်းထားသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ စစ်တမ်းရဲ့ ပထမပိုင်းမှာ လွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အရင်မေးထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် ဖြေကြားသူအတွက်လည်း ဖြေရတာ လွယ်ကူပြီး နှစ်သက်ကြတဲ့အတွက် သူတို့အဆုံးအထိ ဖြေမယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း ပိုများလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်နဲ့မေးတဲ့ စစ်တမ်းကျတော့ မေးသူနဲ့ဖြေသူကြားမှာ အဆင်ပြေတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖြစ်စေပါတယ်။
Put Difficult or Senistive Questions Last (ခက်ခဲသော (သို့) စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော မေးခွန်း များကို နောက်ဆုံးမှာ ထားပါ။)
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတွေကို စစ်တမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးနားမှာ ထားပါ။ ဖြေဆိုသူ တစ်ဦးအနေနဲ့ စစ်တမ်းရဲ့အစမှာ ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ စထိတွေ့ရရင် သူတို့အနေနဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ဒီလောက်တောင် ခက်ပါသလားဆိုပြီး စစ်တမ်းပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရတာဟာ ဒုက္ခပဲလို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို စစ်တမ်းရဲ့ အဆုံးနားမှာ တွေ့ရင် ဖြည့်လို့ပြီးခါနီးပြီဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် (သို့) ဒီအချိန်အခါမှာ သင့်ကို သဘောကျပြီး ယုံကြည်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အားစိုက်ပြီး ဖြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေတာကို ရပ်ပစ် လိုက်ဦးတော့ သင့်အနေနဲ့ ဘာမှမရလိုက်တာထက် စစ်တမ်းရဲ့ တစ်ဝက် (သို့) အကုန်လုံးနီးပါး ဖြည့်ပြီဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် (သို့) ဒီအချိန်အခါမှာ သင့်ကို သဘောကျပြီး ယုံကြည်နေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အားစိုက်ပြီး ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေတာကို ရပ်ပစ်လိုက်ဦးတော့ သင့်အနေနဲ့ ဘာမှမရလိုက်တာထက် စစ်တမ်းရဲ့ တစ်ဝက် (သို့) အကုန်လုံးနီးပါးဖြည့်ပြီးသားကို စိစစ်ဖို့ရလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြံပြုချက်ဟာ ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းများအတွက်သာမက စိတ်အနှေက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ၀င်ငွေအဆင့် (သို့) လူမျိုးနှင့်ဆိုင်သော မေးခွန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Be Careful When Giving Respondents Choices (ဖြေဆိုသူတွေကို ရွေးချယ်မှုများပေးလျှင် သတိထားပါ။)
နောက်အကြံပြုချက်ကတော့ structured questions လို့ ခေါ်တဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ Structured question ဆိုတာကတော့ အများထဲမှ အမှန်ရွေး (Multiple-choice questions) (သို့) အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိန်းဂဏန်းနှုန်းထားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခိုင်းတာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Cover All Possible Answers (ဖြစ်နိုင်သမျှ အဖြေတွေအားလုံးပါဝင်ပါစေ။)
Multiple-choice မေးခွန်းတွေမှာတော့ ရွေးချယ်မှုတွေထဲမှာ ဖြစ်နိုင်မဲ့ အဖြေအားလုံးပါသင့်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက သဘောတူထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးချယ်ရမဲ့ အဖြေတွေထဲမှာ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ "တခြား" (others)၊ "မသိပါ" (Don't know) တို့အပြင် "မပြောလိုပါ" (Don't wish to say) တောင်မှ ထည့်သွင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ပိုတိကျတဲ့ အဖြေကို ရစေရုံသာမက ယုံကြည်မှုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဖြေသူတွေအနေနဲ့ သင်ဟာ သူတို့မဖြေချင်တဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို မရမက တောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဝင်သွားရင် မေးခွန်းကို ကျော်ချင်ကျော်သွားမယ် (သို့) မေးခွန်းတွေဖြေတာကို အပြီးရပ်ပစ်ချင်ပစ်လိမ့်မယ်။
Make Sure Answers Don't Overlap (အဖြေမထပ်အောင် သတိထားပါ။)
Multiple choice မေးခွန်းတွေမှာ ဖြစ်နိုင်သမျှသော အဖြေတွေပေးထားတဲ့အပြင် ၄င်းအဖြေတွေထဲမှာ တစ်ခုတည်းသာ လက်ခံနိုင်သော mutually exclusive အဖြေပါရှိရပါမယ်။ ရွေးချယ်ရမဲ့ အဖြေတွေဟာ မထပ်သင့်ပါဘူး။ ဥပမာ - မေးခွန်းက "ဘယ်လိုမျိုးအစားအစာကို သင်အကြိုက်ဆုံးလဲ"လို့ မေးထားရင် အဖြေတွေ ထဲမှာ ထိုင်းအစားအစာ နဲ့ သက်သတ်လွတ်အစားအစာ ဆိုပြီး (၂)မျိုးစလုံးကို မထည့်ထားသင့်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တချို့သော အစားအစာဟာ (၂)မျိုးစလုံးဖြစ်နေလို့ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာက ထိုင်းသက်သတ်လွတ်အစားအစာ ဖြစ်နေရင် ဘယ်အဖြေက သင့်တော်ပါသလဲ?
Ask About One Thing ataTime (တစ်ကြိမ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းပဲမေးပါ။)
တစ်ကြိမ်တည်းမှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုထက်မကသော မေးခွန်းဖြစ်သည့် နှစ်ခုတွဲမေးခွန်းများ (double - barreled questions)ကို ရှောင်ပါ။
ဥပမာ- သင့်မေးခွန်းက " သင်အလည်အပတ်သွားစဉ်အတွင်း ၀န်ဆောင်မှု (service)နှင့် အစားအသောက်ရဲ့ အရည်အသွေး (food quality) တို့နှင့် ပတ်သက်တဲ့သင့်နှုန်းထားကို သတ်မှတ်ပေးပါ။" လို့ မေးထားရင် ဘယ်လိုမျိုး အဖြေကိုရမယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်ပါဘူး။ ဖြေတဲ့သူဟာ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နှုန်းထားကိုပဲ ဖေါ်ပြပြီး အစားအသောက်ရဲ့ အရည်အသွေးကို ကျော်သွားလေမလား? ဒါမမဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ပယ်မှာလား၊ (သို့) နိမ့်တဲ့ (သို့) မြင့်တဲ့နှုန်းထားကိုပဲ သတ်မှတ်ပေးသွားလေမလား? အဲဒီအစား double-barreled မေးခွန်းကို သီးခြားမေးခွန်း (၂) ခုအဖြစ် ခွဲထုတ်လိုက်ပါ။ တစ်ခုကတော့ ၀န်ဆောင်မှုအကြောင်းဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ခုကတော့ အစားအသောက်ရဲ့ အရည်အသွေးအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Avoid Biased Questions (ဘက်လိုက်သော မေးခွန်းမျိုးကို ရှောင်ပါ။)
ဘယ်မေးခွန်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘက်လိုက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ သင်လိုချင်တဲ့ အဖြေမျိုးကို ဖြေသူဘက်မှ ဖြေလာမဲ့မေးခွန်းမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် အသေအချာဂရုစိုက်ရပါမယ်။
သင့်အနေနှင့် တတ်နိုင်သမျှကို တိကျသော အဖြေတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘက်လိုက်တဲ့မေးခွန်းမျိုးကို ရှောင်ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင်ဟာ ညစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ဒီစစ်တမ်းကြောင့် လူတွေအမြင်မှာ တတ်နိုင်သမျှအကောင်းမြင်စေချင်လို့ (သို့) တဖက်က ကိုယ်စားလှယ် လောင်းကို တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းမမြင်စေလိုတာဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ အဖြေတွေ ရအောင်ဆိုရင် စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေ အများကြီးထည့်ပြီး အဖြေကို သင်လိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင် မေးခွန်းတွေကို ရေးလိုက်ပါ။
ဘက်လိုက်မေးခွန်းမျိုးရဲ့ ဥပမာတစ်ခုကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ "ဒီရုပ်ရှင်ကို သင်မည်မျှ နှစ်သက်ခဲ့ပါ သနည်း။?" ဆိုတာမျိုးပါပဲ။ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးက သင့်အဖြေတွေထဲမှာ "not at all" (လုံးဝ မနှစ်သက်ပါ) ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရွေးချယ်စရာအဖြစ် ထည့်ထားသည့်တိုင်အောင် ဖြေဆိုသူကို အကောင်းဘက်ကို ယိမ်းပြီး ရွေးချယ်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ သင်ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကတော့ ကြားနေ ၀ါဒကို ကျင့်သုံးရာရောက်ပါလိမ်မယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုကို ဘက်လိုက်ပြီး မေးနိုင်တဲ့နည်းတွေက များပြားလှတဲ့အတွက် အားလုံးကို မဆွေးနွေးနိုင်တော့ပါ။ မေးခွန်းထဲမှာ သုံးထားတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေ၊ ရွေးချယ်စရာ အဖြစ်တွေကို စီစဉ်ထားပုံ၊ မေးခွန်းကို တင်ပြပုံတင်ပြနည်းတွေဟာ ဖြေသူအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခုကို ဘက်လိုက်တဲ့မေးခွန်းပြုလုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အတွက် သင့်စစ်တမ်းကို အမှန်တကယ် ချပြီး မကောက်ခင် အစမ်းစစ်တမ်းကောက်တာကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကို အရင်ပေးဖတ်စေပြီး လူအချို့ကို အရင်ပေးဖြေစေခြင်းဖြင့် သူတို့ဟာ ဘယ်နေရာကျရင် ခေါင်းရှုပ်လာတယ် (သို့) ဘယ်နေရာမှာ တခြားပြဿနာရှိလာတယ် ဆိုတာကို တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
QuickandDirtyTips.com မှ Neal Whitman ၏ How to Write Good Survey Questions မှ ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသားရာတွင် ကျောင်းသားများမဖြစ်မနေသိသင့်သည့် grammar အမှားနှစ်ခု
Permalink Reply by Aye Hnin Moe on May 28, 2014 at 16:58
Permalink Reply by James Mary(Honey Aung Myint) on March 13, 2015 at 13:08
Useful in my survey...Thz u